अर्थमन्त्री डा. खतिवडालाई चुनौती कति अवसर कति ?
काठमान्डौ । आयको तुलनामा व्यय धेरै भएपछि मुलुकको बाह्य क्षेत्र नकारात्मक अवस्थामा छ । घट्दो रेमिट्यान्स, बढ्दो व्यापारघाटा र प्रत्यक्ष विदेशी लगानीको न्यून आप्रवाहले मुलुकको शोधानान्तर स्थिति साढे ६ अर्ब रुपैयाँ ऋणात्मक भइसकेको छ । सरकारको खर्च बढेको छ, तर स्रोतमा भने संकुचन आइरहेको छ । यसरी अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचाकांक नकारात्मक देखिइरहेकै वेलामा त्यसैको नेतृत्व गर्न आइपुगेका छन्, डा. युवराज खतिवडा ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू नेतृत्वको सरकार विस्तार गर्दै सोमबार डा. खतिवडालाई अर्थमन्त्रीको जिम्मेवार दिएका हुन् । अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर अवस्थामा रहेको भन्दै कतिपय अर्थशास्त्री तथा सरोकारवालाले डा. खतिवडालाई चुनौतीको चाङमा रहेको बताएका छन् । तर, यस्ता चुनौतीका चाङभन्दा पनि खतिवडालाई अवसर धेरै रहेको अर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारी बताउँछन् । सोमवार साझ नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. खतिवडालाई मन्त्रालयमा स्वागत गर्दै अर्थसचिव अधिकारीले भने, ‘अर्थमन्त्रीलाई केही चुनौती पनि छ, तर चुनौतीभन्दा बढी अवसरै अवसर छन् ।’
अर्थतन्त्रका सूचाकांकहरू केही नकारात्मक र केही सकारात्मक भएको सुनाउँदै उनले नवनियुक्त अर्थमन्त्रीलाई भने, ‘पुँजी निर्माण कमजोर छ, ‘बाह्य क्षेत्र नकारात्मक छ, उत्पादकत्वमा समस्या छ, बजेटरी अनुशासन छैन, मुलुक दशकअघिकै अवस्थामा आइपुगेको छ, तैपनि अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई रोक्ने, राजस्व चुहावट घटाउने र लगानीको वतावरण बनाउने हो भने भोलिका दिन राम्रा छन् ।’ खासगरी स्थायी सरकारलाई चुनौतीका बाबजुत पनि अवसर धेरै रहेको उनको भनाइ छ ।
संकटमा छैन अर्थतन्त्र, अवसर छ
नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. खतिवडालाई तत्कालीन चुनौतीहरू देखिए पनि अवसर धेरै रहेको अर्थ्विद् शंकर शर्मा बताउँछन् । ‘अर्थतन्त्रका सूचाकांकहरू केही नकारात्मक अवस्थामा रहेको भए पनि संकट भने आइसकेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘अर्थतन्त्र भत्किएको छैन, तर सम्भावना धेरै छ, त्यसैले पनि उहाँ (खतिवडा)लाई अवसर धेरै रहेको छ ।’
स्थिर र बलियो सरकार हुनु, चुनाव नलडी आएका कारण कार्यकता रिझाउनुपर्ने बाध्यता नहुनु तथा मुलुक संघीयतामा गइसकेका कारण अर्थमन्त्रीलाई काम गरेर देखाउने अवसर रहेको उनको भनाइ छ । ‘वित्तीय अनुशासन कायम गर्दै खर्च र राजस्वको सन्तुलन मिलाउन सके काम गर्न सहज हुन्छ,’ उनले भने, ‘राजस्व, वैदेशिक सहायता र ऋणसमेत बढाएर खर्च परिचालन गर्न सकिन्छ, तर पेन्सन, भत्तालगायत सामाजिक सुरक्षालाई भने व्यवस्थित गराउनुपर्छ ।’ अर्थमन्त्रीले संघीयता कार्यान्वयन, आर्थिक सुशान कायम र उत्पादत्वमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
केही सन्तोषजनक सूचाकांक
बाह्य क्षेत्र नकारात्मक भए पनि वैदेशिक लगानी, पुँजीगत ट्रान्सफर र पर्यटन आयको अवस्था भने सकारात्मक छ । पछिल्लो समय नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढ्दो अवस्थामा छ । त्यस्तै, पुँजीगत ट्रान्सफरको वृद्धि पनि उच्च छ । पर्यटन आय पनि बढिरहेको छ । यसले उत्पादन बढाउन तथा पुँजी निर्माणमा ठूलो सघाउ पुर्‍याउनेछ । चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आप्रवाह झन्डै दोब्बरले बढेर १४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
नेपालमा पुँजी निर्माणमा सहयोग पुग्ने गरी आएको वैदेशिक अनुदान (पुँजीगत ट्रान्सफर) पनि झन्डै दोब्बरले बढेर ८ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । देशको वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति १०.६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने गरी सुविधाजनक अवस्थामा रहेको छ । जसले बाह्य क्षेत्र स्थायित्व सबल अवस्थामै रहेको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ । मूल्य वृद्धि लक्ष्यअनुसार नियन्त्रणमा छ । यही अवधिमा निर्यात १३.६ प्रतिशतले बढेको छ । पहिलो ६ महिनासम्ममा उपलब्ध आर्थिक परिसूचकहरूले नेपाली अर्थतन्त्रको मिश्रित प्रगति देखाएको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले भन्छ ।
आशा धेरै छ अर्थमन्त्रीसँग
मन्त्रालयमा अर्थमन्त्रीलाई स्वागत गर्दै अर्थसचिव अधिकारीले अर्थतन्त्रका बारेमा जानकारी गराउनुअघि भने, ‘अर्थतन्त्रका बारेमा मैले यहाँलाई अवगत गराइराख्न आवश्यक छैन, अन्यथा आमाका अगाडि मामाको बखान भनेजस्तै हुन्छ ।’ अर्थसचिवको यो उखानले नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. खतिवडाप्रति आशा धेरै रहेको बुझाउँछ । त्यसो त राजस्वसचिव शिशिर कुमार ढुंगानाले कुशल अर्थमन्त्री पाएको भन्दै अब अर्थ मन्त्रालयले गति लिने बताए ।
राष्ट्र बैंकमा झन्डै दुई दशक बिताएका अर्थमन्त्री खतिवडासँग गभर्नर, राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य र उपाध्यक्षका रूपमा काम गरेको अनुभव छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली